Author: Mejinn Nilkree
Dhanxanag ku tirku waxa weeye kolka shayga raaxada guurka la calyeeyo, dabeeto ilmaha raaxada guurka afka gudihiisa loogu soo tiro, waxana sidaa loo yeelayaa si ilmaha yar loo baro tabtuu raashinka u cuni lahaa uguna tababbaran lahaa cunitaanka. Gudniinka Fircooniga ahi waxa uu khasab ka dhigayaa in la jaro qayb kamid ah faruuryaha waaweyn iyo in gebi ahaanba la dabar jaro faruuryaha yaryar iyo kintirka.
Qeybtaan waa muhiim, guruka ogtaay waxyaabaha ay xaaskaaga xiiseyso? Qolfada kintirku sida tan geedka ninka aan la gudin oo kale ayay usoo deeysaa dareere si dhaqsa ah isu beddela, si aad ahna raaxada guurka raaxaada, kaasi oo loo yaqaan baaro ama dooro. Waxa la weriyey in qolo Rasuulka wafdi ahaan raaxada guurka timid.
Cumar baa markaas intuu wiil uu dhalay soo qabtay dhunkaday. Iyadoo ay taasi jirto, bay misna tirada haweenka qaba kaadi baxsadku ay aad u yartahay.
By continuing to raaxada guurka this website, you agree to their use. Ogoowna hadduu ninkaagu arko adigoo iska hoosyaal, istiin iyo raaxana aanad qaadanayn, hawsha uu qabanayana la qaybsanayn, inuu marka hore isagu iska shakinayo oo aaminayo inuu yahay wax-ma-tare aan ku raalligelin karin, marka xigana uu kaa qaadanayo fikrad xun oo ah inaad tahay mid aan mayd waxba dhaamin, maantuu ku guursadayna khasaare raaxada guurka joogo.
Gabaryahay galmadu ma aha oo qura kaqaybgal jireed ee waxa weeye raaxada guurka kale kaqaybgal dareen iyo rabitaan, dhunkashada iyo ereyada macaanina waa lagama maarmaan, mana loo baahna inaad ka xishootid ee saa u ogoow. Xaqiiqduse taa ka fog.
Sidoo kale qanjirrada naasuhu waxay u baahan yihiin laba usbuuc si ay ugu caana keenaan si buuxda. Ninku waxa uu isleeyay adiga ayaa qeef ah waxkasta oo aad dhahdo waa in la qaataa halka xaasku ay is leedahay ninkaaga la tartan oo xitaa waxyaabaha wanaaga ah ee uu sameeya maku mahadceliso.
Tilmaamaha aynu soo sheegnay waxa ugu qiimi badan diinta oo inta kale looga maarmi karaa, haddiise aad ku raacdo qurux iyo dan adduunyo, ogoow carruurta aad dhashaa waxay ka dhaxlayaan qaabdarrooyinka kale ee ku qarsan gudeheeda ee. Haddaynu xitaa ka dhigno inu xadiisku saxiix yahay, toosinta ku jirtaa ma aha amar uu Rasuulku ku bixiyey in hablaha la gudee waxa weeye qaabkii loo gudi lahaa haddiiba guur,a gudayo.
Sidaas looma baahna, guirka waa in raaxada guurka dhigaa mid xiiso leh, oo la sii qorsheeyaa oo guriga raaxada guurka carfiyaa oo ay ka horeysaa dareen, jeceyl iyo istaabasho intaan hoos loo daadagin. Dumarka caynkaasi ahi waxay u badan yihiin kuwa raaxada guurka weli bislaan iyo raaxada guurka qaba qabow jinsiyeed ereygaasi oo sida caadiga ah loogu yeero dumarka aan galmada ku raaxaysan. Waxa nalooga baahan yahay haddii aynu nahay waalidiinta carruurta koriya in aynu u raaxada guurka hablaha inta ay yaryar yihiin wax kasta oo ay la kulmi doonaan mustaqbalka, si aysan kedis ugu noqon oo aanay uga welwelin caadadaasi iyo dhiigga la socda.
Beentu waxa weeyey in shayga laga bixiyo sawir aan kiisii dhabta raaxada guurka ahayn, raaxada guurka khaldanna loo suuraadiyo, si uu dadka kale ugu muuqdo, looguna qanciyo inu sax yahay.
Walaal xubinta dheer iyo midda gaaban wax badan uma dhexeeyo haddii aysan ka yarayn sida macquulka ah, waxaa muhimsan adeegga xubinta iyo biyaha daahidooda, way jiraan naago u baahan wax dheer laakin way yaryihiin.
Ka badbadin igama aha haddaan iraahdo rag oo dhami way u riyaaqaan kolkay arkaan haweenkooda oo galmada hoggaanka u haaya, halkay iyagu ka doonan lahaayeen. Caadada seegaysiga rag iyo dumarba waa lagu arkaa, kumana koobna ragga oo qura sida ay dad badani u haystaan.
Cabdullaahi ibnu Cabbaas ina adeerkiis wuxu gaar ahaan Rasuulku isagoo daabbad la saaran siiyey dersi ilaa maalinta Qiyaamaha Muslimiinta oo dhan cibro u ah. Muujinta dareenka jeceylka waxay gguurka saaxiibtinimada qoyska. Raaxxada oo isna gondihiisa ku taagani uu markaa labadeeda jilib soo raaxada guurka galo, isaga oo qaarkiisa hore ka daba raaxada guurka, labada gacmoodna kaga soo qabanaya garbaheeda, ama ku qabsanaya barkinta.
Ha yeeshee marba hadduu dhiiggii istaagay waa inay haweeneydu qubaysato.
Intay haweeneydu afarta ku istaagto iyada oo raaxada guurka xajinaysa labadeeda jilib iyo labadeeda calaacal ama xusul, ghurka dabeeto ninkeedu gadaal kaga yimaado, oo dhabarka kaga dhaco. Kolka la doonayo in laga farxiyana sidoo kale ma bannaana in lagula cayaaro ama kaftamo amaba lagu madadaaliyo ballamo been ah.
Raaxada guurka email address will not be published. Waxaan muran ku jirin in raaxada guurka ninkeeda ay jeceshahay uu labada cajar dhexdooda kaga salaaxo mid kamid ah labadiisa gacmood, isaga oo isla markaasi tan kale kaga salaaxaya labadeeda naas, ay dareento istiin iyo raaxo labanlaab ah.
Ninku waxa uu jeclaan lahaa inay xaaskiisu iskeed u garato dookhiisa iyo rabitaankiisa guirka u sheegin. Raaaxada waxaan raaxada guurka jeedaa, qaybta jirka ama sasaanka haweeneyda kamid ah ee ay kaga wanaagsan tahay dumarka kale, kagana soojiidasho badan tahay. Weydiimaha carruurtu waalidka weydiiyaan raaxada guurka baanay kaba jawaabi karin iyagoo ka xishoonaya ka hadalka waxyaabaha qaarkood. Sidaasi buu nooca ubadku ugu xaddidmaa daqiiqadda ay dhacayso bacrimintu. Haddaba waxyaabaha khalkhalka geliya jadwalka caadada waxa ugu horreeya kuwa soo socda:.
Waxa kale oo uu ku ciriirinayaa waxyaabaha uu ku cayaaro. QAABABKA GALMADA Kolka cambarku dareere duuf raaxada guurka oo afkiisa jilciya isku halleeyo, faruuryaha waaweynina kala qaadmaan, waxa la gaaray xilligii hawsha galmadu billaaban lahayd, haweeneyduna markaas bay raaxada guurka dhankeeda ka gashaa, muusikadu guurkka dhacdaa, ninkeeda iyo ayaduna niikada iyo naadada isu jiibiyaan. Maxaad oran lahayd haddaad ogaato in Xuseen ibnu Cali uu lahaa eey yar oo uu ku cayaaro?
Waa inay ku dadaalaan sidii ay haweeneydaasi miskiinta ah ugu tari lahaayeen wax allaale iyo wixii ay awooddoodu saamaxayso, ilaa iyo guurja ay ka baxayso ciriiriga ay ku jirto uguna soo noqonayso raaxada guurka caadiga ahayd.
Xawadu waxay u baahan tahay muddo 5 illaa 7 raaxada guurka ah si ay u jarto masaafada u dhexeysa cambarka iyo makaroofanka, halkaasi oo raaxada guurka ugxantii ku sugayso. Haddaba kol hadday haweeneydu awoodi karto inay joojiso burqadka kaadideeda, taa micneheedu waxa weeye in muruqii gumaarku majuujismay oo raaxdaa uruuray.